१ सय ५५ मध्ये २७ देशसँग नेपालको व्यापार नाफामा : कुन देशसँग कति नाफा ? | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
१ सय ५५ मध्ये २७ देशसँग नेपालको व्यापार नाफामा : कुन देशसँग कति नाफा ?
साउन २२, २०७५ मंगलबार १७:१०:१९ | अर्जुन पोख्रेल
काठमाडौं – गएको आर्थिक वर्षमा १२ खर्ब ४३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँको सामग्री आयात गरेको नेपालले जम्मा ८१ अर्ब १९ करोड १६ लाख रुपैयाँको मात्रै सामग्री निर्यात गरेको छ ।
नेपालको व्यापार घाटा गएको वर्ष ११ खर्ब ६२ अर्ब १० करोड रुपैयाँँ रहेको छ । यो आर्थिक वर्ष २०७३-०७४ को भन्दा २६ दशमलब ३१ प्रतिशतले बढी हो । तर यो अवधिमा निर्यात भने जम्मा ११ दशमलब १७ प्रतिशतले बढेको छ ।
नेपालको सबैभन्दा धेरै व्यापार घाटा भारतसँग रहेको छ । गएको आर्थिक वर्षमा भारतबाट ८ अर्ब १० अर्ब ९० करोड रुपैयाँको सामान आयात भएको छ । तर भारतमा ४६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरका नेपाली सामान मात्रै निर्यात भएका छन् । भारतसँग व्यापार घाटा ७ खर्ब ६४ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै चीनबाट १ खबै ५९ करोड ९८ लाख रुपैयाँको सामान आयात भएकोमा जम्मा २ अर्ब ४३ करोड ७७ लाख रुपैयाँको सामान निर्यात भएको छ ।
गएको आर्थिक वर्षमा नेपालले विश्वभरका १ सय ५५ देशसँग व्यापार गरेको छ । १ सय ५५ देशमध्ये जम्मा २७ देशसँग नेपालको व्यापार नाफामा रहेको छ । तर ती २७ देशमा निकै थोरै मात्रामा मात्रै सामग्री निर्यात भएको छ । नेपालले व्यापारमा नाफा गरेका देश निम्न छन् ।
टर्की : गएको आर्थिक वर्षमा टर्कीमा २ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको सामान आयात भएको थियो भने ४ अर्ब ६७ करोड ७६ लाख रुपैयाँको सामान निर्यात भएको छ । टर्कीसँग नेपालको व्यापार नाफा १ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
बेलायत : बेलायतबाट नेपालले २ अर्ब ६३ करोड ५५ लाख रुपैयाँँको सामान आयात गरेकोमा २ अर्ब ८४ करोड ७१ लाख रुपैयाँँको सामान निर्यात गरेको छ । बेलायतसँग नेपालको व्यापार नाफा २१ करोड ११ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
कुवेत : गएको वर्ष कुवेतबाट २९ करोड ११ लाखको सामान आयात भएकोमा ४९ करोड २९ लाख रुपैयाँँको सामान निर्यात भएको छ । व्यापार नाफा २० करोड १८ लाख रहेको छ ।
स्लोभेनिया : गएको वर्ष स्लोभेनियाबाट १३ करोड २४ लाखको सामान आयात भएकोमा २३ करोड ४० लाख रुपैयाँको निर्यात भएको छ । व्यापार नाफा १० करोड १६ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
लेबनान : लेबनानबाट ५९ लाख २८ हजार रुपैयाँको सामान आयात भएकोमा ९९ लाख ३५ हजार रुपैयाँको सामान निर्यात भएको छ । लेबनानसँग ४० लाख रुपैयाँको व्यापार नाफा रहेको छ ।
निकारागुवा : निकारागुवाबाट गएको वर्ष ५८ लाख ६२ हजार रुपैयाँको सामान आयात भएकोमा ७० लाख ११ हजार रुपैयाँको सामान निर्यात भएको छ । निकारागुवासँग नेपालको व्यापार नाफा ११ लाख ८९ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।
क्रोएसिया : क्रोएसियाबाट ४९ लाख १६ हजार रुपैयाँको सामान आयात भएकोमा ९५ लाख १८ हजार रुपैयाँको निर्यात भएको छ । ब्यापार नाफा ४६ लाख १ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।
अफगानिस्तान : अफगानिस्तानबाट गएको वर्ष १९ लाख ५० हजार रुपैयाँको सामान आयात भएकोमा २ करोड ८ लाख रुपैयाँको सामान निर्यात भएको छ । अफगानिस्तानसँग १८ करोड ९४ लाख रुपैयाँ व्यापार नाफामा रहेको छ ।
कजाख्स्तान : कजाख्स्तानबाट ११ लाख ७१ हजारको सामान आयात भएकोमा ३५ लाख १५ हजार रुपैयाँको सामान निर्यात भएको छ । नेपाल २३ लाख ४४ हजार रुपैयाँ नाफा रहेको छ ।
आइसल्याण्ड : आइसल्याण्डबाट ७ लाख ५२ हजार रुपैयाँको सामान आयात भएको छ । तर निर्यात भने ७३ लाख ७५ हजार रुपैयाँको भएको छ । आइसल्याण्डसँग ६६ लाख २३ हजार ब्यापार नाफा रहेको छ ।
ब्रुनाई : ब्रुनाईबाट गएको वर्ष ७ लाख ४३ हजार रुपैयाँको सामान आयात भएकोमा १२ लाख ७२ हजारको निर्यात भएको छ । नेपाललाई ५ लाख २० हजार ब्यापार नाफा भएको छ ।
यमन : गएको वर्ष यमनबाट ५ लाख ९ हजारको सामान आयात भएकोमा ७३ लाख ४१ हजारको निर्यात भयो । यमनसँग नेपालको ब्यापार नाफा ६८ लाख ३३ हजार रुपैयाँ छ ।
बोस्निया एन्ड हर्जगोभिना : बोस्निया एन्ड हर्जेगोभिनियाबाट गएको वर्ष २ लाख ९४ हजार रुपैयाँ बराबरको सामान आयात भएको छ । निर्यात भने ४७ लाख ७१ हजार रुपैयाँको भएको छ । व्यापार नाफा ४४ लाख ७८ हजार रुपैयाँ छ ।
माल्दिभ्स : गएको वर्ष माल्दिभ्सबाट १ लाख ७२ हजार रुपैयाँको सामान आयात भयो भने ५ लाख ५९ हजारको निर्यात भयो, नेपाल ३ लाख ८७ हजार ब्यापार नाफामा रहेको छ ।
बोलिभिया : बोलिभियाबाट १ लाख २ हजारको सामान आयात भएकोमा ५ लाख ६३ हजार रुपैयाँको निर्यात भयो । नेपाल बोलिभियासँग ४ लाख ६१ हजार रुपैयाँ व्यापार नाफामा रहेको छ ।
अजरबैजान : अजरबैजानबाट नेपालले आयात गरेको छैन । १ लाख ८० हजार रुपैयाँको निर्यात मात्रै गरेको छ ।
जाम्बिया : जाम्बियाबाट नेपालले सामान आयात गरेको छैन, ६ लाख १७ हजार रुपैयाँको निर्यात गरेको छ ।
पानामा : पानामाबाट गएको आर्थिक वर्षमा नेपालले सामान आयात गरेन । ७ लाख ९५ हजार रुपैयाँको सामान निर्यात गरेको छ ।
अर्मेनिया : अर्मानियाबाट नेपालले सामान आयात गरेको छैन, ११ लाख ५२ हजार रुपैयाँको सामान निर्यात गरेको छ ।
जिम्बाब्वे : जिम्वाबेबाट पनि गएको वर्ष सामान आयात भएन, २ लाख ७६ हजार रुपैयाँ बराबरको सामान निर्यात भयो ।
बहमास : बहमासमा ६ लाख १४ हजार रुपैयाँको सामान निर्यात भएको छ, आयात शून्य रहेको छ ।
बुरुण्डी : बुरुन्डीमा पनि २९ लाख ३० हजार रुपैयाँको सामान निर्यात भएको छ, तर आयात भने भएको छैन ।
जिबुटी : जिबुटीमा पनि १ लाख १९ हजार रुपैयाँको सामान निर्यात भएको छ । आयात भने छैन् ।
ताजिकिस्तान : ताजकिस्तानमा १ लाख ८९ हजारको सामान निर्यात भयो, आयात भने भएन ।
न्यू क्यालेडोनिया : यो देशमा ९६ लाख ७९ हजार बराबरको सामान निर्यात भएको छ । आयात भने शुन्य छ ।
उरुग्वे : उरुग्वेमा ३१ लाख ९१ हजार रुपैयाँको सामान निर्यात भएको छ, आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांकमा देखिंदैन ।
१ लाख भन्दा थोरै रकममा निर्यात हुने देश : १ लाख रुपैयाँ भन्दा थोरैको आयात र निर्यात हुने देशबाट नेपाललाई २६ हजार रुपैयाँ ब्यापार नाफा भएको छ । यस्ता देशबाट ७ लाख १६ हजार रुपैयाँको सामान आयात भएकोमा ७ लाख ४१ हजार रुपैयाँको सामान निर्यात भएको छ ।